News Collection: पाँच नायकको नजरमा करिश्मा
पाँच नायकको नजरमा करिश्मा
चलचित्र सन्तानवाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाएकी नायिका हुन्, करिश्मा मानन्धर । आजसम्म १०० भन्दा वढि सिनेमा खेलेर २५ वर्ष फिल्मी क्षेत्रमा विताएकी नायिका मानन्धर पुरानादेखि नयाँ कलाकारमाझ लोकपि्रय छिन् । आज हामीले नायिका मानन्धरका वारेमा ५ नायकको धारणा वुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
ट्याटुले त भुतुक्कै पार्छः जिवन लुईटेल
करिश्माको अभिनय ?
वोली साह्रै मनपर्छ, वोलीमा जुन लड्का तड्का आउछ नि, म त भुतुक्कै हुन्छु ।
वन पिस ड्रेस र साडीमा त उहाँ साह्रै सेक्सी, के भन्ने र ।
सेक्सी अंग ?
आँखामा साह्रै सेक्स अपिल छ, छातिमा वनाउनु भएको ट्याटु त झनै मनमोहक ।
उहाँसँग कस्तो भुमिका निर्वाहा गर्न मन छ ?
कलेजको युवा युवती, जहाँ करिश्माले स्कट लगाउनुहुन्छ, म सर्ट पाईन्ट लगाएर रोमान्स गर्ने मन छ ।
मनपर्ने कुरा ?
पर्सानालिटी र पार्टिहरुमा जाँदा उहाको देखिने प्रभाव ।
खासै सल्लाहा नै पाईन ।
राजेश हमाललाई सोध्नुः श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
भित्री मनदेखि दुख्ने गरेर जसरी चिच्याउनुहुन्छ, त्यो साह्रै मनपर्छ ।
आधुनीक पहिरन र वन पिस ।
यो प्रश्न त राजेश हमाललाई सोध्नु न – लामो हासो ) आँखा
राम्रो श्रीमान् श्रीमतीको जोडि भएर ।
चाडै रिसाउनुहुन्छ तर त्यती नै चाडो फकीनुहुन्छ ।
एकअर्कालाई ईज्जत दिने वानीले आकर्षण गर्छ ।
धेरै नै मुडि हुनुहुन्छ, मुडि नवन्नु होला ।
सेक्सी लाग्दैनः राजवल्लभ कोईराला
उहाँको जुन सुन्दरता छ, जुन चमकता छ, त्यसालाई सिनेमाभित्र हामीले उतार्न सकेका छौं जस्तो लाग्दैन ।
सेमी र्फमल – कोर्ट, पाईन्ट )
उहाँ सुन्दर लाग्छ सेक्सी लाग्दैन ।
उहासँग कस्तो भुमिका निर्वाहा गर्न मन छ ?
जोडि भएर त खेल्ने अवस्था छैन । अव कस्तो भुमिका सुहाउला भन्ने कुरा दर्शकले निर्धारण गर्ने हो हामीले गरेर मात्र हुँदैन ।
त्यो गहीराईमा चिनेको छैन, जुन गहिराईमा वर्णन गर्न सकुँ ।
उहाँ आफैमा आकर्षण हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो उमेरमा जुन नाम र उचाई पाउनु भएको छ त्यो आफैमा आकर्षण लाग्यो ।
धेरै कुरा सिनेमाले उहाँलाई दिएको छ, यसैले अव निर्देशन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सिनेमा सुन्दरताले मात्र खेल्नु पर्छ भन्ने छैन, फरक भुमिका निर्वाहा गर्न सकिन्छ ।
वोल्ने शैली मनपर्छ: आर्यन सिग्देल
नर्मल सवै कुरा हरु नै राम्रो छ ।
जोडि भएर त खेलीन्न । अरु चै हुनसक्छ ।
उहाँको वोल्ने शैली मनपर्छ ।
सुन्दर र पर्सानालिटी ?
फिल्म लाइनलाई नछोड्नु भन्ने नै हो ।
कमेडी भूमिकम गर्न मन छः धिरेन शाक्य
उनको अभिनय ?
उनको अभिनयमा निखारपन छ, जुन असाध्यै मनपर्छ ।
लुक्स अनुसार जस्तो पहिरन पनि सुहाउँछ तर सारीमा अझ राम्रो देखिनुहुन्छ ।
करिश्मासँग कस्तो भूमिका निर्वाहा गर्न मन छ ?
उहाँसँग मलाई अव कमेडि खालको भूमिका निर्वाहा गर्न मन छ ।
वोलीमा पक्का हुनुहुन्छ, एकदमै पंक्चुअल ।
आँखाले नै गर्छ ।
जसरी आफुलाई मेन्टेन गर्दै जानु भएको छ त्यसरी नै गर्दै जानु ।